Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Spain » Onye ozi agwaetiti Canary 'enweghị nchekwa' ka mmadụ 5,000 na -agbapụ na mgbawa La Palma
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Mgbawa ugwu mgbawa La Palma ebibila opekata mpe ụlọ 20 ma manye mkpochapụ mmadụ 5,000.
Ruo ugbu a, ndị isi achụpụla ihe dị ka puku mmadụ ise site n'ọtụtụ obodo dị na El Paso na Los Llanos de Aridane.
Dị ka onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya na Spain Reyes Maroto si kwuo, agwaetiti Canary dị mma ileta na mgbawa ugwu na -agba ebe ahụ bụ "ihe ngosi dị ebube".
Mgbawa ugwu mgbawa na agwaetiti La Palme nke Canary Islands ebibila opekata mpe ụlọ 100 ma manye mkpochapụ mmadụ 5,000, ebe ọtụtụ narị ndị ọzọ nọ n'ihe ize ndụ site na mmiri na -asọba, nke a na -atụkwa anya na ọ ga -ebute gas na -egbu egbu mgbe ọ rutere n'oké osimiri. .
Onye isi obodo El Paso, La Palma, Sergio Rodriguez Fernandez dọrọ aka ná ntị na obodo Los Llanos de Aridane dị nso nọ n'ihe ize ndụ, ndị ọrụ gọọmentị “na -eleba anya n'ọnọdụ nke lava” na -eso mgbawa ugwu mgbawa ahụ n'ehihie Sọnde.
Ihe onyonyo weghaara mgbe mgbawa ahụ gosiri na mmiri na -efegharị ọtụtụ narị mita n'ime ikuku, na -eziga iberibe mgbawa n'ime Oké Osimiri Atlantik na mpaghara La Palma, nke akụkụ ya. Agwaetiti Canary nke Spain.
Ndị ọrụ gọọmentị achụpụla ihe ruru mmadụ 5,000 site n'ọtụtụ obodo dị na El Paso na Los Llanos de Aridane. Ọ bụ ezie na lava ka na -agbasa, enweghị atụmatụ ịpụpụ ugbu a. Enwebeghị mmerụ ahụ ma ọ bụ ọnwụ ọ bụla, ebe onye na -ahụ maka ugwu mgbawa Nemesio Perez kwuru na ọ nweghị nke a na -atụ anya ya, ọ bụrụhaala na ndị mmadụ na -akpa ezi uche.
Ihe dị ka ndị njem nlegharị anya 360 ka esi na ebe ezumike na La Palma gbasaa mbibi ahụ wee buru ụgbọ mmiri gaa n'agwaetiti Tenerife dị nso na Mọnde, ọnụ na -ekwuchitere onye na -ahụ maka ụgbọ mmiri Fred Olsen kwuru.
Enwere ike ịchụpụ ndị njem nlegharị anya 180 ọzọ na La Palma n'ehihie ụbọchị, onye nkwuchite kwukwara.